Energy Sistem dia manolotra ny isan'ireo mpandahateny filalaovana | Vaovao momba ny gadget
Energy Sistem dia manolotra ireo mpandahateny vaovao
Eder Esteban | | miteny, Sary sy feo
Miaraka amin'ireo seha-pihainoany lalao vaovao, Energy Sistem dia mamela antsika zava-baovao maro hafa amin'ny hetsika fampisehoana ao amin'ny IFA 2019. Ny marika fanta-daza mamela antsika mpandahateny vaovao ihany koa. Na dia elanelana iray ihany koa izay mitazona singa maro natao ho an'ny filalaovana, lafin-javatra iray izay tsy maintsy raisina amin'ity lafiny ity eo amin'ny isan'ireo vokatra marika.
Energy Sistem dia nilaza fa ireo mpandahateny ireo dia natao ho manome ny traikefa tsara indrindra amin'ny lalao ho an'ny mpampiasa. Ka ny fanoloran-tena ho an'ny marika hanana fisianana lehibe kokoa amin'ity sehatry ny tsena ity dia mazava. Noho izany, avelany amina maodely mpandaha-teny roa isika amin'ity tranga ity, izay efa ananantsika ny angon-drakitra lehibe.
1 Gaming Speaker ESG 5 Thunder, tsapa ny bass ary ampitomboina ny traikefanao amin'ny lalao
2 Gaming Speaker ESG 3 Immersive, ny herin'ny feo stereo rehetra
Gaming Speaker ESG 5 Thunder, tsapa ny bass ary ampitomboina ny traikefanao amin'ny lalao
Ny maodelin'ny Speaker Speaker ESG 5 Thunder dia rafitra iray 2.1W tampon'ny fahefana 100 stereo mpandahateny (50 W RMS). Izy io koa dia manana jiro RGB namboarina, natao hanolorana traikefa amin'ny lalao milentika tanteraka. Natao mba hampitomboana ity traikefa lalao ity.
Ity rafitra fanamafisam-peo ity dia misy subwoofer ho an'ny fanatsarana ny bas, mamela ny mpampiasa hiditrika anaty lalao. Ho fanampin'izany, mampiditra bass reflex sy mpandahateny feno roa, miampy baseball sy fampitoviana amin'ny treble. Ity dia zavatra ahafahana mifehy ny fomba hamoahan'ny mpandahateny ny feo tsirairay rehefa ampiasaina izy ireo.
Mikasika ny fifandraisana, ny Gaming Speaker ESG 5 Thunder dia manolotra fahafaha-manao betsaka. Satria afaka mampiasa azy tsy misy tariby isika. misaotra ny fisian'ny Bluetooth 5.0 kilasy I. Fa azo atao koa ny mampifandray azy ireo amin'ny tariby. Misaotra ny fidirana nomerika roa: Digital Optical Input sy HDMI ARC ary koa ny input 3,5 mm mini jack analog. Izy io koa dia mamela ny filalaovana mozika voatahiry ao anaty fahatsiarovana USB ivelany
Gaming Speaker ESG 3 Immersive, ny herin'ny feo stereo rehetra
Gaming Speaker ESG 3 Immersive dia resaka rehetra rafi-peo stereo 2.0 misy jiro RGB namboarina, natao hanolorana traikefa amin'ny lalao feno. Amin'ity tranga ity dia rafitra iray misongadina indrindra amin'ny heriny izay hatolony antsika ho an'ny traikefan'ny mpampiasa tsara.
Ny mpandahateny dia manana fahefana tampon'ny 60W (30W RMS) ho an'ireo fotoana izay ilainao mihaino ny antsipiriany rehetra amin'ny lalao mazava sy amin'ny zava-misy. Ho fanampin'izany, mampiditra bass reflex sy mpandahateny feno roa izy io, ary koa ekipa fitoviana bass sy treble, izay ahafahantsika mifehy ny fomba hamoahan'ny mpandahateny ny feo tsirairay rehefa ampiasainay izany.
Mikasika ny fifandraisana, ny Gaming Speaker ESG 3 Immersive dia manome safidy marobe: avy amin'ny fomba tsy misy tariby —Ny Bluetooth 5.0 kilasy II— toy ny tariby, miaraka amin'ny fahan'ny jack mini 3,5 mm; ary mamela ny fahaizana mitendry mozika voatahiry ao fahatsiarovana USB ivelany.
Ireo fitaovana roa ireo dia misy jiro eo alohany sy jiro mahery any aoriana izay miasa mivantana amin'ny rindrina. Ny maodelinao RGB LED dia iray hafa amin'ny tombony lehibe, satria manararaotra ny loko isan-karazany izy ireo hanatsarana ny rivotra iainana sy asitrika ao amin'ny lalao tsirairay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Sary sy feo » Energy Sistem dia manolotra ireo mpandahateny vaovao
Energy Sistema dia manolotra Smart Speaker Wake Up, mpandahateny fanairana miaraka amin'i Alexa
Energy Sistem dia mandefa tsipika vaovao momba ny vokatra filalaovana feo